Iinqaba zokupholisa zisetyenziselwa ukufudumeza, ukungena komoya, kunye nomoya (HVAC) kunye neenjongo zeshishini. Inika ukusebenza ngokungaxabisi nangokusetyenziswa kwamandla kweenkqubo ezifuna ukupholisa. Ngaphezulu kwe-1500 yezixhobo zorhwebo zisebenzisa isixa esikhulu samanzi ukupholisa izityalo zazo. I-HVAC ...
Inkqubo yoNyango lwaManzi yokuPholisa iNqaba
Kwiinkampani zeshishini ezisebenzisa inqaba yokupholisa indawo yayo, uhlobo oluthile lwenkqubo yokunyanga amanzi kwinqaba yokupholisa ihlala iyimfuneko ukuqinisekisa inkqubo efanelekileyo kunye nobomi beenkonzo ezinde. Ukuba amanzi apholisayo enqaba ayashiywanga enganyangeki, ukukhula kwendalo, ukungcolisa, ukukala, kunye nokubola kunoku ...
Isingeniso esisisiseko kwiiTowering Towers
Inqaba yokupholisa yindawo yokufudumeza ubushushu, ngaphakathi kwayo ubushushu buyekwe emanzini ngokudibana phakathi kwamanzi nomoya. Iinqaba zokupholisa zisebenzisa umphunga wamanzi ukwala ubushushu kwiinkqubo ezinje njengokupholisa amanzi ajikelezayo asetyenziswa kwizicoci zeoyile, izityalo zamachiza, izityalo zamandla, intsimbi mil ...